hanafaka!!!... Sell VoIP untethered miaraka amin'ny orinasa Internet Telephony.
Ve ianao nizara minitra for Internet Telephony (IP) mpivarotra hafa VoIP?
Ny soa sisiny dia kely dia kely ny miaina miankin-doha nizara minitra Provider mba mandanjalanja?
Aza hitranga MORE! VoIP Reseller na Distributor ny fotoana mamorona anao manokana Internet Telephony Company!
Nahoana no Work in VoIP?
Ny tsena VoIP Mitombo haingana ary lasa mahazatra teknolojia izay eto hijanona. Be vola tahiry sady nandroso toe-javatra na trano fonenana sy ny fanatitra mpampiasa raharaham-barotra no tena tsena mpamily.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny isan'ireo mpampiasa ny VoIP, lasa reseller ny VoIP dia midika hoe miditra ny tsena vonona ho niely haingana be, ary mety hahazo fiainana tsara.
ary tsara izay ataonao ...
Satria ho Reseller, Distributor na Reseller ny VoIP manoatra lavitra noho ny. Izany no hanome anao ny fahafahana hanohy ny mitombo ara-toekarena, expandirte entrepreneurially sy ny zavatra tena manan-danja: occupationally ho lasa mahaleo tena.
Izany no, Distributor VoIP afaka hahatratra asa sy ara-bola feno ny fahalalahana raha manapa-kevitra ny mananika ny dingana manaraka ... inona? Ny Escalon ho lasa VoIP mpamatsy na Wholesale.
Niara-niasa toy ny VoIP Reseller na Distributor Minitra hatrany hahatonga anao reseller!
VoIP Provider ho mamela anao mamorona anao manokana Internet Telephony Company!
TR3S Antony ho lasa mahaleo tena
Azonao atao ny manomboka amin'ny raharahan'ny hafa tsy misy fampiasam-bola lehibe SY fetran'ny mety ho vitantsika.
VoIP mamela anao ho Provider tolotra VoIP tolotra bebe kokoa ny efa misy mpanjifa sy hahazo vola bebe kokoa. Ny raharaham-barotra dia tonga noho ny turnkey vahaolana izay ahitana ny mpampiasa intuitive fitaovana, Account Management, tahan'ny, tolotra, ara-teknika ny fanohanana sy ny singa fa ilaina ny ho tonga mpandraharaha mahomby VoIP.
Afaka hametraka anao manokana tahan'ny VOIP SERVICES nivarotra.
Total fahafahana hisafidy mpitondra izay te-miantoka ny tsara indrindra eny an-tsena tahan'ny VoIP. Satria vidin'entana ambongadiny VoIP dia tena ambany dia ambany, Afaka hiteraka tombontsoa goavana ny mpanjifa noho ny haivarotra amin'ny antsinjarany vidin-javatra. Noho izany dia afaka manapa-kevitra fa tena tsy hahasoa anareo ho, satria ianao afaka ny hametraka ny nisafidy ny tahan'ny ho an'ny asa VoIP. Prodrás hanana tetika Pricing, fa hifanaraka ny zavatra ilain'ny raharaham-barotra sy ny tsena, ary hisarika more mpanjifa, famoronana vidin'ny maro, drafitra sy ny fampahafantarana tahan'ny.
Azonao atao ny fitantanana ny raharaham-barotra tsy misy fehezan-dalàna na Programming.
Ianao Izay mahary ny orinasa finday, hahazo ny lohamilina voaendrika VoipSwitch mora ampiasaina sehatra fitantanana ambongadiny sy antsinjarany kaonty. Afaka mifehy tanteraka ny zava-drehetra, ny fampiasana ny tantara, active antso, sarany, mpamatsy, ny mpizara ary bebe kokoa avy amin'ny Internet-mifandray fitaovana.
Izy io dia eran-Mpanome ny VoIP Minutes
Famoronana sy ny fampandrosoana amin'ny raharahan'ny hafa Internet Fifandraisan-davitra (IP feo) raha mivarotra ianao minitra miaraka amin'ny tahan'ny ho an'ny mpanjifa hiantso raikitra sy / na ny finday na aiza na aiza eto an-tany amin'ny VoIP!
Satria ho Proveedor VoIP ...
Mamela anao mivarotra ambongadiny minitra ho an'ny IP telephony, satria amin'ny raharahan'ny hafa opéra miantso.
ankehitriny, Efa lafiny hafa mifandray amin'ny trano lehibe kokoa ho an'ny mpanjifa, empresas, raharaham-barotra na ny trano toy ny Wholesale Traffic, Antsinjarany, Calling Cards, Callshop, Resellers sy ny maro hafa; ianao 100% mahaleo tena manomboka amin'ny raharahan'ny hafa amin'ny Servervoip VoipSwitch.
Ny Company VoIP Telephony dia natao ho anareo mitantana, monitorees ezaka sy ny fitaovana tsotra na ny fahaizany.
Hiditra In mpamatsy,
Minutes VoIP Provider Wholesale Markets ...
TERMINACION ambongadiny VOIP A-Z
Miara-miasa amin'ny orinasa maneran-tany sy ny mpandraharaha VoIP manolotra lalana maro be mamela anao VoIP AZ famaranana tahan'ny amin'ny ambongadiny kalitao avo. Afaka manara-maso ny fifamoivoizana foana mba hahazoana antoka fa ny mpanjifa hahazo ny hatsaran'ny ny antso ho amin'ny toerana rehetra. Ambongadiny drafitra dia natao mba hihaona amin'ny ilain'ny mpanjifa lehibe mpaninjara sy ny fanompoana ny VoIP ambongadiny.
TERMINACION VOIP VAROTRA
Independence Provider VoIP koa dia mamela anao mivarotra antsinjarany VoIP Famaranana, fanatitra feo avo kalitao sy ny fifaninanana tahan'ny. Azonao atao ny manome mivantana sy ara-dalàna lalana CLI, tsirairay amin'ny ambaratonga samihafa ny kalitao sy ny tahan'ny ho an'ny mpanjifa AZ Destinations, cabinas, locutorios, fianakaviana, sns.
VOIP NY BUSINESS
VoIP mamorona lalana amin'ny fifandraisana rehetra endri-javatra ho an'ny orinasa lehibe izay manao antso amin'ny tariby sy ny finday avy any amin'ny firenena sy izao tontolo izao. SIP vatan-kazo azo antoka sy vola miteraka feo sy ny tahirin-kevitra mahomby mihoatra ny iray tambajotra matanjaka vahaolana ho an'ny fifandraisana orinasa mamokatra kokoa sy mora kokoa ny hiatrika.
Azo atao ny Famoronana amin'ny raharahan'ny hafa dia tsy misy farany VoIP ...
Miaraka amin'ny raharaham-barotra VoIP manitatra ny asa fanompoana ho misy toerana itodiana, Na izany na tsy firenena.
Manomboka ny orinasa mivarotra ny fifandraisan-davitra sy ny IP telephony na Voice over Internet mpanjifa, fianakaviana, orinasa na ny orinasa tsy ao an-tanàna.
Am-ponao ny Brand White:
Miaraka amin'ity tontolo ity, Raha toa ianao ka Distributor na reseller, dia tsy miasa ho an'ny orinasa hafa engrandecer, fa hametraka ny marika ny anaranao!
Tools "Ireo rehetra izay One":
Modules rehetra for fifamoivoizana, tahan'ny, antso, ny mpizara resellers, mpanjifa sy mpamatsy mba hifehy ka aza mikasika izay avy na aiza na aiza!
Raha tsy misy ny fampiasam-bola lehibe:
Miaraka amin'ny fampiasam-bola kely dia afaka mametraka ny telefaonina raharaham-barotra avy any amin'ny fampiononana ny fitadiavam-bola an-trano, ary hanomboka vola bebe kokoa.
Tsy manam-petra VoIP fifamoivoizana:
Total fahafahana hisafidy mpitondra izay te-hamorona anao manokana VoIP tahan'ny sy ny tombony ho an'ny mpanjifa sy ny mpamatsy ao an-tsena.
ambony % vola:
Mamorona ny tahan'ny sy ny fitantanana ny vola miditra manokana! Tsy misy intsony ny fanaraha-maso fotsiny takelaka, fa tanteraka VoIP Management Software.
Manokana VoIP mpizara:
Manana ny Windows Server 2008 amin'ny teny Espaniola amin'ny VoipSwitch sehatra fitantanana asa rehetra ao amin'ny orinasa Telefonia IP.
mpanjifa, mpilanja, Resellers:
miteraka mpanjifa, mpamatsy na resellers noho ny VoIP minitra sy ny mpampiasa rehetra Company manome noho ny fanaovana antso na hizara ny minitra.
Rates More mifaninana:
Maha-mpamatsy ambongadiny dia afaka manam-bola ny mamorona anao manokana vidin-javatra sy ny mivarotra azy ireo ny tsara indrindra amin'ny vidin-javatra ho an'ny mpanjifa.
Ambongadiny / Wholesale Provider:
VoIP mikendry ny tolotra sy ny antsinjarany mpanjifa, izay mitaky kalitao avo lamba amin'ny vidiny takatry VoIP AZ.
Ianao reseller na Distributor VoIP Minutes?
Izany no fahafahana ho anareo kosa ny mpampiasa ...
Ampitomboy ny Business + satria mahasoa Global mpamatsy Minutes, hahatratra ny fahaleovan-tena ara-bola ary manana ny resellers na mpizara ny VoIP Minutes
in fotsiny 24 Mety ho lasa ny ora VoIP Telephony @ Empresari. Nahoana?...
Araka ny Minitra Distributor reseller na efa manana portfolio-mpanjifa orina ary ho mora kokoa hanitatra ny IP Voice Service.
INDEPENDIZARTE, Tsy mamela anao mamorona anao manokana tahan'ny sy ny fitantanana ny vola miditra manokana! Tsy misy intsony ny fanaraha-maso fotsiny takelaka, Manana manontolo Management VoIP Software.
No More Portales, Ankehitriny ianao dia afaka mitantana ny Platform VoipSwitch
Access isaky ny mpampiasa sy ny tenimiafina
Management sehatra for IP telephony
Isan-karazany ny Servers
Wide asa fanompoana sy VoIP fifamoivoizana
Control Rates sy ny Minutes
Mamaritra ny vola lany sy ny fanjifana contrala
Mametraha isan-karazany ny mpampiasa
Maro ireo mpitondra tamin'izany andro izany
Fitaovana VoIP Connection
Tefeo misy fitaovana ho an'ny feo: ip
Zarao karatra fiantsoana anao manokana
Portal sy VsPortal
Kobany mpanjifa sy ny mpanjifa ny tantara
Ho anjara-raharahany sy OnlineShop
Namoaka ny volavolan-dalàna / faktiora ny asa
Izany dia ahitana ny safidy maro ny VoIP fanompoana
Narahi-Contrala sy sariaka antso
Manome minitra trano rantsankazo na parlors
Tefeo sy Resellers, II sy III sy ny ny vavahadin-tserasera
ary, Inona no soa hafa ianao VoIP Provider mahazo Being?
Mba manomboka raharaham-barotra antso Internet, Tsy ilaina ny vola be dia be ny vola, amin'ny fampiasam-bola ihany no kely sy ny torohevitra tsara, azo atao ny miditra tsena ity.
ny Entrepreneur-mpandraharaha Fahombiazana in VoIP:
Fantaro izany raharaha izany fahafahana Telefonia, raha ny hafa kosa aoka avy.
Meet olona (resellers) izay afaka hanampy anao hahomby amin'ny raharaham-barotra.
Tsy vitan'ny dia manome service telephony ... nanatevin-daharana ianao fianakaviana, namana sy ny raharaham-barotra S.
ary indrindra ...
fomba ny ny Resellers ny Red Distributors na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao sy ny sisa, tolotra fifandraisan-davitra, dia hahatratra ny orinasa isan-jorony.
Ny Empresari didy fampisamborana @ S VoIP Service
Misy iraisam-pirenena maro mpanjifa mampiasa ny tolotra fifandraisana Integrated mba manomboka amin'ny namany Pon Internet Telephony (VoIP) amin'ny vokatra tsara ... Miaraka amin'ny fitaovana "zavatra rehetra izao amin'ny ONE" Software VoipSwitch niala VoIP Resellers na Distributors minitra ho lasa Empresari @ S fifandraisan-davitra!
Tsy misy fialan-tsiny noho ny fanaovana raharaham-barotra an-tserasera: Nanomboka ny orinasa manokana VoIP telephony tanana ServerVoIP.com mpanome tolotra ho an'ny antso amin'ny finday sy ny raikitra. Ankehitriny dia mandoa ny mpanjifa safidy maro toy ny hostings, rindrambaiko, Hardware, dokam-barotra, Inter Alia.
Heveriko fa ny orinasa 8 loharanom-asa mivantana amin'ny tanàna sy niteraka an'arivony asa tsy mivantana be noho 19 firenena: Kolombia, Peru, Arzantina, Bolivia, Shily, Kiobà, Guatemala, Repoblika Dominikanina, Costa Rica, Puerto Rico, Meksika, US, Espaina, Brezila, Italia, Andorra, Maraoka, Japana sy ny Ekoatera.
Tale Jeneralin'ny ServerVoIP
Con Call Speed, quiteña orinasa, Tsy natokana ho an'ny barotra ny fifandraisan-davitra sy ny teknolojia vokatra. Nandritra ny valo taona sy noho ny ServerVoIP.com sehatra miaraka amin'ny fanohanana sy lahatsary Tutorials; Afaka manome asa fanompoana amin'ny teny Espaniola ny orinasa mpanjifa amin'ny alalan'ny Internet ny rafitra antso.
Te-ho Provider VoIP Minutes, NOW >
Inona no VoIP Telephony Software ho an 'ny Company?
Software VoIPswitch instalado de Windows Server 2008, ary ny sasany lohamilina (iray hafa isan-karazany) Windows Server 2012.
VoIP Reseller ho Global Supplier.
Voipswitch manana ny fitaovana rehetra ilainao ho an'ny finday Internet service. Tsy maintsy fitantanana fananana Administrator, switchboards sy softphones ho an'ny fifandraisana. Así; VOIP Switch manome anao ny tsara indrindra amin'ny fifandraisan-davitra aterineto traikefa. Izany dia mampino sehatra.
Ny hoe Provider Minutes World amin'izao fotoana izao azo atao amin'ny lohamilina, ary tanteraka indrindra tsena sehatra. ServerVoIP manao izay ahafahantsika -fully garatizado- dia izay mitondra fiara tsy misy fahalalana ara-teknika, mamela anao hanomboka hiasa avy amin'ny fampiononana ny an-trano sy ny hahazo vola avy hatrany.
in fotsiny 24 Mety ho lasa ny ora VoIP Telephony @ Empresari
Rehefa reseller na Distributor Minutes manana portfolio-mpanjifa orina, ary ho mora kokoa hanitatra ny IP Voice Service
Fanteno ny Server ilainao noho ny VoIP Telephony Company.
avy amin'ny 50 fantsona izay voambara feo avy $ 150.00 dolara isam-bolana, Misy rehetra-in-iray ho an'ny rehetra.
RESELLER VoIP, Jereo ny mety tsy maintsy ho VoIP Provider ...
A VoIP Reseller asa amin'ny mpamatsy iray Minutes
Business VoIP miasa amin'ny multivendor IP
ary izany indrindra no ataonao amin'ny VOIP SERVER ...
Fa ny mpampiasa, Ny fanangonam-bola amin'ny finday isam-bolana amin'ny teny rehefa miantso telefaona an-tariby sy finday ary avy na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao dia tena laharam-pahamehana.
Ary raha misy EMPPRESAS izay manolotra vola ambany noho ny ell @ S mifandray amin'ny fianakaviana, namana na raharaham-barotra antony tanteraka OK handoavana ny SERVICE!!!
sy ny fomba afaka manampy azy ireo?...
Miaraka amin'ny mpizara VOIP manana avana ny azo atao mba hamahana izay ilain'ny ny mpanjifa. saika, VoIP Provider voaloboka satria ny portfolio-ny mpizara maneran-tany Minutes; manome anareo ny fahafahana hanana be dia be ny mpitondra tambajotra ho an'ny iray na maromaro lasibatra.
Mamorona anao manokana tahan'ny,
Mamaritra ny drafitra manokana,
Minute hizarana ny trano rantsan-kazo, na ny parlors,
Vender tus propias miantso karatra (karatra fiantsoana),
Fitantanana ny vola miditra ihany!
Satria tsy ianao ihany tontonana manana fanaraha-maso ny VoIP Reseller, Manana manontolo Telephony IP Management Software (VOIP).
Am-ponao ny Internet telephony orinasa amin'ny VoipSwitch
Mila fotsiny ianao mba handray andraikitra sy ny EMPRENDER!
- Server VoIP incluye VIDEOS TUTORIALES FULL HD -tserasera amin'ny mizara tsara ny sehatra izay hahatonga anao ho manam-pahaizana -
FREE: Chapter ny boky sy ny Discover
Ohatrinona ny vola dia afaka manao amin'ny VoIP?
Te-handray Azy FREE izao>
Ny vaovao dia 100% segura con nosotros y nunca será compartida.
Araho anay ao: